N95 Nkpuchi, Nkpuchi ihu, Nkpuchi ịwa ahụ, Nkpuchi Ahụike - Nuomigao
ihe anyi n’eme
Fujian Nuomigao Medical Technology Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepụta nlekọta ahụike nke onwe ya na ihe mkpuchi ahụike, na-etu ọnụ maka agụmakwụkwọ ọkọlọtọ ọgbara ọhụrụ, akụrụngwa mmepụta ihe dị elu gụnyere igwe eji emechi onwe ya, igwe akpaka N95 akpaka.
Dabere na mkpa gị onwe gị, anyị ga-enye gị ọrụ ndụmọdụ gbasara ọrụ
Anyị na-enye gị ọ bụghị naanị ngwaahịa, kamakwa ihe ngwọta dị elu na ọrụ ngwaahịa
Nweta akwụkwọ ndebanye aha ngwaọrụ ahụike, asambodo CE na asambodo FDA
O guzobela usoro nhazi zuru oke na netwọ ọrụ maka azụmaahịa buru ibu, ma guzobe ezigbo mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ
Ibe (ike kwa ọnwa)
Atụla egwu! Ike nkpuchi na-agbake
Site na mmepe na-aga n'ihu na ọnọdụ ọrịa ntiwa, ojiji nke masks abawanyela nke ukwuu. Ọ bụla mejupụtara ọ bụla bụ ihe nchekwa nchekwa maka ndị mmadụ na ndị ọrụ ahụike. Ngalaba ruru eru na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị metụtara ya na-alụ ọgụ megide oge. Dabere na data ọhụrụ, dị ka nke ọnwa asaa nke ọnwa Febụwarị, ọnụego mbulata nke ụlọ ọrụ ihe mkpuchi nkpuchi mba ahụ ruru 73%.
ihe anyị kwesịrị ịma gbasara masks otu esi eyi akwa nkpuchi? (ma eme ya)
agba agba: ị ga-anọ ebe ahụ oge niile: atụpụla ya mgbe ị hapụrụ ụlọ ahụ, ma ọ bụ mgbe gị na onye ọrịa na-akparịta ụka ma ọ bụ na ịchọrọ ịfụ ume ngwa ngwa ihe kachasị mma? dị ka usoro usoro: larịị nchedo (ala, ọkara ma ọ bụ elu) nkasi obi na kwesịrị ekwesị: imi imi tha…
Ihe nkpuchi China na-emejupụta ụwa: Ihe mmepụta ihe mkpuchi maka ọkara nke mbupụ ụwa
Ka ihe ụwa maka ihe masks na-abawanye, China nwere ike jiri nwayọ nwayọ nwayọ ugbu a. Tan Qunhong, onye isi njikwa obere mkpofu mkpuchi na-ekpu ekpu na Central China, kwuru na ọ mezuela usoro ịzụta gọọmentị China ma na-amalite ugbu a na mbupụ. Na Additi ...